दिल निशानिको दिपालाई झटारो,महानायक राजेश हमाल नै हुन् – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/दिल निशानिको दिपालाई झटारो,महानायक राजेश हमाल नै हुन्
के दीपाश्री निरौला राजेश हमालको बराबरी हैसियतमा पुगेकै हुन् त ? अथवा उनी चलचित्र निर्मात्री भैसकेपछि अन्य महानायकहरू जन्मिएका हुन् त? दर्शकले भनेजस्तै दीपाका लागि महानायक अर्कै व्यक्ति हुन् त ? यस्ता प्रश्नहरू पनि जन्मिएका छन् । तर दर्शकको मात्रै कुरा हैन यो विवादपश्चात मिडियामा आएका दर्जनौं चलचित्रकर्मी तथा निर्माता/निर्देशकले दीपाले आफ्नो मुखमा आफैँ थुकेकोसम्म भन्न भ्याएका छन् । यसरी अचानक विवादमा तानिएपछि दीपाश्री निरौलाको जीवन नै ‘छक्कापञ्जा’ जस्तो भएको छ ।नेपाली चलचित्र विकासका लागि धेरै योगदान दिएका तथा कलाकार समेत रहेका युवराज लामाको कथन पनि यस्तै थियो ।
केही चलचित्र चल्यो भन्दैमा आफू कहाँबाट आएको हो, आफ्नो धरातल के हो र नेपाली चलचित्र यहाँसम्म कसरी आइपुग्यो भनेर नबिर्सिन दीपाश्री निरौलालाई उनले अनुरोध गरेका छन् । उनले भनेका छन्- राजेश हमाल कलाकार (हिरो) मात्र हैन उनको जस्तो पर्सनालिटी अरू सिनेमाकर्मीको नभएको उनको तर्क छ । मेरो पनि यही तर्क छ । दीपाश्री निरौलाले अग्रजको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ । अलिकति घमण्ड, अलिकति दम्भ जो छ, त्यो त्याग्नुपर्छ । कोही पनि मानिस सदाबहार हुन सक्दैनन्, तर पक्कै नायकत्व ग्रहण गर्न सक्छन् । भिडियो हेर्नुहोस
Breaking news,फेरी देशभर लकडाउन वा निषेधाज्ञा हुने लगभग निश्चित